» कसरी फुक्ला जसपा आन्तरिक असजिलाको गाँठो ?
५ बैशाख २०७८, आईतवार १९:५९
लुकाउनु पर्ने, ढाकछोप गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता, कुनै ठाउँ बाँकी रहेन । जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक असजिलो अब जसपाको आन्तरिक बिषय मात्र रहेन, यो राष्ट्रिय राजनीति कै सर्वाधिक चासो र चिन्ताको बिषय बन्न पुग्यो ।
समस्या विचार/सिद्धान्त/एजेण्डामा थिएन । समस्या पार्टी एकता र एकताको भावनामा थिएन । समस्या बृहत्त राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट एक वैकल्पिक शक्ति ‘सम्पूर्ण विकल्प’ निर्माण गर्ने सोचमा थिएन । समस्या थोरै सांगठनिक क्षेत्रमा थियो, तर हल नहुने खालको थिएन । समस्या थोरै कार्यशैलीमा थियो, त्यो पनि हल हुन सक्दथ्यो । तर, एकाएक ‘राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न’ प्रमुख भएर आइदयो । यसले करिब २ महिनादेखि पार्टीको जीवनलाई पूर्णतः अवरुद्ध बनाएको छ ।
लेखक : डम्बर खतिवडा
नेपालको राजनीतिक इतिहास अनेक दुःख, विडम्बना र दुर्भाग्यले भरिएको छ । यहाँ अपेक्षितभन्दा अनपेक्षित परिणामहरू धेरै आउँछन् । प्रत्याशित भन्दा अप्रत्याशित घटनाहरू धेरै हुन्छन् । ‘आफू ताक्छु मुडो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ भनेजस्तो गर्न खोजेको एक थोक हुन्छ, भइदिन्छ अर्कै थोक । मानिस थोरै हुँदा पार्टी ठूलो नहुने ‘शक्ति’ नबन्ने, मान्छे धेरै हुँदा स्वार्थ टकराउने, सोच नमिल्ने, यो रोग नेपाली राजनीतिको आम रोग हो, जो अहिले जसपामा पनि सक्लिएको छ ।
सिद्धान्ततः जसपाको उद्देश्य प्रष्ट थियो– यसले शास्त्रीय पुँजीवाद र शास्त्रीय साम्यवादको परम्परा र विरासतभन्दा फरक सृजनाशील समाजवादको नयाँ धार विकास गर्न चाहेको हो । जसलाई ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ भनियो । यसले बहुसाँस्कृतिकतावाद र समावेशिताको सिद्धान्त अबलम्बन गरेको थियो । काग्रेस र कम्युनिष्टजस्ता विचार र पार्टीलाई समदुरीमा राखेर आफ्नो भिन्नै धार विकास गर्न चाहेको थियो ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा जसपाका लागि कांग्रेस, कम्युनिष्ट, देउवा, ओली, माधव, प्रचण्ड उस्तैउस्तै हुन । तर, यो रणनीतिक महत्वको बिषय हो । दीर्घकालीन महत्वको बिषय हो । तत्कालको समस्या अर्कै हो । तत्काल के गर्ने ? विशेषतः गत बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दलविभाजन अध्यादेश ल्याएपछि बिग्रन थालेको राजनीति, जुन पुस ५ गतेको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुग्यो, जुलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बदर गरिदियो, त्यसपछिको अवस्थामा के गर्ने ? आजको प्रश्न यो थियो, यस बिषयमा प्रष्ट दुईधार देखियो ।
अन्यथा संस्थागत प्रक्रिया अबलम्बन गरी समस्या छिनोफानो गर्नु पर्दछ । यदि तत्काल छिनोफानो नगर्ने हो भने पनि बैठक बसेर स्थितिको ब्रिफिङ गर्नु पर्दछ । यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने, पार्टी जीवनलाई अनिर्णय र अनिश्चितताको बन्दी बनाउने कार्य कसैबाट भएको भए पनि त्यो सैह्य हुँदैन । यस्तो व्यवहारले अनेक आशंका, अविश्वास, विग्रह र विभाजनको सहउत्पादन गर्ने सम्भावाना बढेर जान्छ ।
कतिपय मानिसले भनेजस्तो यो ‘पूर्व सपा’ र ‘पूर्व राजपा’ को कुरा हैन । बैठक बस्ने हो भने थाहा हुन्छ कि पूर्व राजपातर्फका थुप्रै साथीहरूको भावना पनि अहिले ‘ओलीसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन’ भन्ने पक्षमा नै छ । तसर्थ यो नयाँ कार्यदिशाको समस्या हो । संविधान जारी गर्दा बखतदेखि नै अहिले जसपामा समाले अभएका सबैजसो पूर्व घटकहरू ‘ओली अवधारण’ को विरुद्धमा थिए । दुई बुँदे सहमतिमा आधारित तत्कालLन संघीय समाजवादी फोरमको सहकार्य सुखद नरहेको सबैलाई प्रष्टै छ । पूर्व सपा र राजपाको एकता प्रक्रियाको गृहकार्य गर्दा राजपातर्फका नेताहरूले बारम्बार ओली सरकार छोड्नु पर्ने बिषयलाई एक मुद्दा बनाएको अहिले पनि झलझली सम्झना आउँछ ।
गत बैशाख ८ गतेबाट ओलीसँगको पार्टीको सम्बन्ध झनै तिक्त भयो । ओलीले पूर्व सपा फोड्न अनेक अवाञ्छित हर्कत गरेको, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको अध्याय सबैका आँखा सामु छ । पुस ५ गते पछि पार्टी ओली कदमलाई ‘प्रतिगमनकारी’ भन्दै देशभरि आन्दोलनमा गयो । हज्जारौं कार्यकर्ता र लाखौं जनताले त्यो आन्दोलनमा भाग लिए । पुष ५ गतेको ओली कदमलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी’ भनेको प्रेस वक्तव्य र पार्टी सर्कुलरमा महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरको मसी अझै धमिलो भएको छैन । आज एकाएक ओली मोही किन र कसरी उत्पन्न भयो, त्यो गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र छौं । भलै कि जसपा संसदवादी पार्टी हैन, यसले सहभागितामुलक– समावेशी लोकतन्त्रको शासकीय स्वरुप र व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । तर, जतिखेरसम्म जुन खेलको मैदानमा हुइँन्छ, त्यही खेलको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । फुटबल खेलुन्जेल हातले बल हान्न पाइँदैन, दण्ड लाग्छ । ‘डि–एरिया’ भित्र त्यस्तो भयो भने अझ ‘पेनाल्टि’ हुन्छ । यदि हातले बल हान्ने मन भएको भए, फुटबल हैन, भलिबल खेल्नु पर्दछ । न ह्याण्ड हुन्छ, न पेनाल्टी ।
संसदीय लोकतन्त्रको आम नियम हो कि कुनै पार्टीको सरकार असफल भयो भने विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकार दिनु पर्दछ । अन्यथा प्रतिनिधिसभाको औचित्य समाप्त हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको एउटा मुख्य काम नै सरकार जन्माउनु हो । यदि पुनस्थार्पित प्रतिनिधिसधभाले बैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो भन्नु पर्‍यो, फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको माग गर्नु पर्‍यो, अन्यथा वैकल्पिक सरकार दिनै पर्‍यो । नत्र संसदीय लोकतन्त्रको नियम, नैतिकता पालना भएको मान्न सकिन्न ।
अहिले आएर जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन दिनु भनेको विगत ३ वर्षमा विशेषतः गत बैशाख ८ गते यताका उसका सबै कुमर्मलाई अनुमोदन गर्नु हो । यति, ओम्नी र वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचार ठीक थियो भन्नु हो । कोरोना लकडाउनकालको असंवेदलनशीलता र लापरवाही ठीक थियो भन्नु हो । सेक्युरिटी प्रेसमा ७० करोडको कमसिन भाग्ने ‘धर्मपुत्र छनौट’ ठीक थियो भन्नु हो । गत बैशाख ८ गतेपछि आफ्नै पार्टी फुटाउने गरिएको हर्कतहरू ठीक थिए भन्नु हो । यस्तो पनि कुनै राजनीतिक लाइन हुन्छ ? यस्तो कार्यदिशामा जाने हो भने अस्ति भर्खरै ओलीतन्त्रविरुद्ध त्यत्रो संघर्ष गरेका, लाठी खाएका कार्यकर्ता र जनताको मनस्थिति के होला ?
अहिले कहाँनेर कुन हिसाबले ओलीसंगको सहकार्य ठीक छ ? उनको आफ्नै पार्टी ४ टुक्रा भएको छ । घमण्ड, अहंकार, दम्भ र एकलौटी सोचले हुँदाखाँदाको दुईतिहाई गुमेको छ । ओलीसंग अहिले जम्ममा ७२ जनाको मात्र राजनीतिक समर्थन छ । माधव नेपाल पक्ष आवश्यक परे ‘फ्लोर क्रस’ को मनस्थितिमा छ भन्ने कर्णालीको प्रदेशसभाले पुष्टि गरिसकेको छ । ओली यावत नैतिक मूल्यहरू बिर्सेर अल्पमतको सरकार घिसारिरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो भन्दा अनैतिक कार्य अरु केही हुन सक्दैन । साधु र श्रद्धेय चरित्रका ठाकुरजीले ओलीको यस्तो अनैतिक कार्यलाई किन काँध थाप्न पर्‍यो ?
यसो भन्दा कहाँ काँध थापेको छ ? कार्यदलले रेशम चौधरीको रिहा र मुद्दा फिर्ताको कुरा मात्र गर्दैछ, सत्ता गठबन्धनबारे कुनै कुरा गरिरहेको छैन भन्ने उत्तर आउँन सक्दछ । यथार्थमा त्यो कुनै ‘वैधानिक कार्यदल’ हैन । पार्टी विधनले त्यस्ता कार्यदल गठन गर्ने अधिकार कुनै एक अध्यक्षलाई दिएको छैन । त्यसलाई ‘अनौपचारिक वार्ता टोली’ सम्म मान्न सकिन्छ, कार्यदल हैन ।
जहाँसम्म रेशम चौधरीलगायत आस्थाका राजबन्दीहरूको रिहाई र झुठा मुद्दा फिर्ताको सवाल छ, त्यो मानवीय संवेलनशिलताको प्रश्न हो, न्यायको प्रश्न हो, मानवताको प्रश्न हो । यसलाई यसलाई सत्ता बार्गेनिङको कार्ड बनाउन पाइँदैन । आस्थाका राजबन्दीहरू युद्धबन्दी साटासाट गरेजस्तो हैन। राजबन्दीहरू अवश्य छुट्नु पर्दछ । झुट्ठा मुद्दाहरू अवश्य खारेज हुनु पर्दछ । ओली यसो गर्न राजी भएछन् भने उनलाई ‘धन्यवाद’ भन्न सकिन्छ,। त्यसपछि पनि ओली सरकारलाई राजनीतिक समर्थन दिन सकिँदैन ।
यदि ओली सच्चिन्थे भने एउटै राजनीतिक गोत्र र बर्र्षौ लामो सहकार्य भएका नेताहरूसँग त्यस्तो व्यवहार गर्थे ? जसलाई आफ्नै पार्टीको माया छैन, आफ्नै सिद्धान्तको मोह छैन, आफैंले बनाएको आन्दोलनको भविष्यबारे कुनै चिन्ता छैन, आफ्नै कमरेडहरूको राजनीतिक जीवनबारे कुनै मतलब छैनन्, त्यस्तो मान्छेले भलो मतिले जसपाको हित चाहन्छ ? ठाकुरजीको हित चाहन्छ ? ओली प्रवृत्ति कुनै सच्चिने प्रवृत्ति हैन, यो पराजित गर्नुपर्ने प्रवृत्ति हो ।
जहाँसम्म ओली मात्रै निर्गतीला हुन र ? प्रचण्ड र देउवा कुन गतिला हुन भन्ने तर्क छ, यो आफ्नै ठाउँमा ठीक छ । हिजो कांग्रेस र एमाले मिलेरै संविधान बनाएका हुन । प्रचण्डले आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने लोभमा ओलीलाई काँधमा बोकेकै कारण आज ओली देशलाई यस्तो लठिभद्र बनाउने स्थितिमा पुग्न सकेका हुन् । प्रश्न ओलीभन्दा देउवा, प्रचण्ड सक्षम, ठीक, इमान्दार, क्रान्तिकारी भन्ने हैन ।
प्रश्नकने आज ओली सरकारको विकल्प दिने कि न दिने, ओलीलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिने कि नदिने भन्ने हो ? ओलीलाई फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सजिलो बनाई दिने कि न दिने भन्ने हो ? ठीक छ, वैकल्पिक सरकारमा जसपाले बरु नेतृत्व दाबी गरोस् न, माके, कांग्रेस सहमत भए भने त्यो हुन पनि सक्ला ? अनि कति मुद्दा फिर्ता लिने हो, राजबन्दी रिहाई गर्ने हो, त्यो आफ्नै हातमा आउने कुरा हो ।
ओली चाहन्छन् कि जसपा कि ओली सरकारमा सामेल होस कि बाहिरबाटै समर्थन गरोस्, कि तटस्थ बसोस् । अहिले ओलीको यही इच्छा बमोजिम जसपालाई तटस्थताको अभ्यास गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । एकीकृत जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन दिने वा ओली सरकारमा सामेल हुने कुनै कल्पना पनि गर्न सक्दैन । यसो भयो भने यो पार्टीमा सामेल भएका हज्जारौं नेता/नेताको जीवनमा अकल्पनीय राजनीतिक/नैतिक संकट आउँनेछ । यस्तो कल्पना कसैले गरेको छ, यो सम्भव छ भनेर कसैले सोचेको छ भने सपनाबाट ब्युझेकै राम्रो हुन्छ ।
यदि जसपाको एउटा सानो हिस्साले ओलीको नौका थाम्ने मनसाय बनाएको हो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि उहाँहरूसँगै हुन्छ । ओलीवाला सुत्रहरू भन्दैछन्– कित जसपालाई पुरै ‘हन्ट’ गर्ने हो, कित फुटाउने हो कि व्यक्तिहरू निकालेर केही थान हृदयेश त्रिपाठीहरू थप गर्ने हो । यो मैले कुनै आरोप लगाएको हैन, ओली निकटस्थ साथीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा आफैंले भनेका हुन् । र उनीहरूलाई यो पनि भनिएको छ कि त्यस्तो सपनाबाट ब्युझेकै राम्रो ।
जहाँसम्म केही थान हृदयेश त्रिपाठीहरू थप्ने ओलीको इच्छा हो, त्यो पनि व्यवहारिक रुपमा असंभव छ । संसदमा कुनै प्रस्ताव आउने वित्तिकै माधव नेपाल पक्षले फलोर क्रस गर्दछ । त्यो त प्रष्टै छ ।
यी यावत परिस्थितिमा सविनय आग्रह छ– सन्तनेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो अडान एकपटक पुनर्विचार गर्नुहोस् । ५ जनाको पदाधिकारी समूहमा वैकल्पिक सरकारको पक्षमा यथाशीघ्र सहमति बनोस् । पार्टी कार्यकारिणी समिति वा केन्द्रीय समितिको बैठक अबिलम्ब डाँकियोस् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा परेको गाँठो फुकाइयोस् । यदि पार्टी समायोजन प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि हो भने कुरा प्रष्ट आयोस कहाँनेर के नमिलेका हो, मिलाउन सबैले पहल गरौं । कृपया ओली सरकारको लाससंग सति जाने आत्मघाती इच्छा कसैले नगरौं । साझापाेष्टबाट ।
घरमा बस्दाबस्दै अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्नेबित्तिकै के गर्ने ? डा. अनुप सुवेदीकाे टिप्स
बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी जोगाउने ?
दोस्रो चरणको खोप लगाएकाहरु कति सुरक्षित ?
पत्रकारकाे काेभिड समस्या समाधानकाे लागि बन्याे ‘रेस्पोन्स टिम’